Firefox ရဲ. ထိပ်တန်းလုံခြုံရေး Add-on များ
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Firefox ရဲ. ထိပ်တန်းလုံခြုံရေး Add-on များ
1 Firefox ရဲ. ထိပ်တန်းလုံခြုံရေး Add-on များ on 25th February 2010, 10:15 am
အသုံးကျတဲ. Firefox ထိပ်တန်းလုံခြုံရေး Add-on များ....
Private Browsing Mode နဲ. အင်တာနက် ကို အလည် ထွက် ခွင်. ကို Stealther မှ ပံ့ပိုး ပေးပါ လိမ်. မယ်။ ဘယ်လိုခြေရာ လက်ရာ မျိုး ကိုမှ ချန်ထားခြင်း မပြုပဲ ခြေရာ ဖျောက် ပေး မှာ ပါ Browsing history, cookies, cache, recent tabs အစရှိတာ တွေကို ပါ ဖျောက် ဖျက် ပေးနိုင် ပါ တယ်။
Stealther နဲ. Distrust လို Add-on တွေ က Private Browsing ကို အလို အလျောက် ဖျက် ပေး မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ Close'n'forget ကတော. အထူး close button ကို နှိပ် ပေးလိုက်တာ နဲ. အဲဒီ ကိုယ် ၀င် ခဲ့ တဲ့ site နဲ. ဆိုင် တာ တွေအားလုံးကို ဖျက် ပေး သွား မှာပါ။
WOT က တော. Google Chrome မှာပါ အသုံးပြုနိုင် မှာ ပါ။ viruses, spywares, adware, malicious spam, phishing အစရှိတဲ့ ခြိမ်း ခြောက် မှု တွေအား လုံးကို ကယ် မှ ပေး မယ်.ကယ် တင် ရှင် ပါ ပဲ။ အရင် အမြစ် ပေါင်း များစွာကို အသုံး ပြုထားတဲ. စု ဆောင်း ထား သော အချက် အလက် တွေအရ သူ က ကာ ကွယ် ပေး နိုင် စွမ်း ရှိပါတယ်။
Browser အတွက် ရှိ ကို ရှိ သင့် တဲ့ လုံခြုံရေး Add-on ဖြစ်ပါ တယ်။ ယုံ ကြည် စိတ် ချရတဲ့ ဆိုက် တွေ မှသာ run ပေး နိုင် မှာ ဖြစ် တဲ့ အပြင် cross-site scripting တိုက်ခိုက် မှု တွေနဲ. clickjacking များကို ပါ ကာ ကွယ် ပေး နိုင်ပါတယ်။
ဖွင်. ထားတဲ့ tab တွေ နေရာ မှာ ကိုယ် ရွေး ချယ် လိုက် တဲ့ tab တွေ နဲ. အစား ထိုးသွားမှာပါ။ ဥပမာ အား ဖြင်. boss လာ တဲ. အချိန် facebook ဖွင့် ထား မိ ရင် Alt+ နှိပ် လိုက် ၊ အရင် ဖွင့် ထားခဲ့တဲ့ web စာမျက် နှာ ကို ပြန် ရောက် သွား မှာ ပါ။
Tab တွေ အားလုံး ကို သိမ်း၊ ပိတ်လိုက် ပြီး ကိုယ်.ရဲ. ပင် မစာ မျက် နှာ ကို ဖွင့် ပေးမှာ ပါ။ Browsing history, cookies, cache, password တွေ အား လုံး ကို ဖျက် ပေး သွားမှာပါ။
Tab ကို နာ မည် အသစ် ပေး နိုင် တဲ့ Add-on ဖြစ် ပြီး အဲ တာ တွေ ကို ပြန် လည် ဖျက် ပစ် နိုင် ဖို. Page Title Eraser က စွမ်း ဆောင် ပေး မှာပါ။
Inbox တွေကို Spam မေးလ် တွေ ၀င် ရောက် လာ ခြင်း မှ ကာကွယ် ပေး ပါ တယ်။
ကိုယ့် ကို နောက်ယောင် ခံ တာမျိုး တွေကို စိတ် ပူစရာ မလိုတော့ ပါဘူး။ Super-Cookies သက် တော် စောင့် ဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ် လို.မရတဲ. Flash-Cookies တွေက နေကာ ကွယ် ပေးပါ တယ်။
ကိုယ့် ကို မျက်စိ ဒေါက် ထောက် ကြည့်နေတဲ့ ဆိုက် တွေ ကို သူက ပြန် ပြီး မျက်စိ ဒေါက် ထောက် ကြည့် ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဘယ် ဆိုက်က ကိုယ့် ကို ခြေရာ ခံနေတယ် ဆို တာ ကို သတိ ပေးမှာပါ။
Tor ကို အသုံး ပြုလျက်ရှိနေတဲ. Browser ကို အသုံး ပြုသူများ အနေ နဲ. လုံ ခြုံစိတ် ချစေမယ့် Add-on ဖြစ် ပါ တယ်။ အမည် မသိ စေ ဘဲ အင်တာနက် အသုံး ပြုပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
URL pattern တွေကို အခြေခံ ထား တဲ့ proxy ဆာ ဗာ တွေ တခု နဲ. တခု အင်တာနက် ချိတ် ဆက် မှု တွေ ကို အလို အလျောက် ကူး ပြောင်း ပေး သွား မှာပါ။
Ref; ; Time To Time Vol-3, No.8
ဒီ add-on ဘယ် လို install လုပ် ရ မယ် မသိ တဲ့ သူတွေ အတွက်
Tool ထဲ က add-ons ကို နှိပ် ပါ။
Get Add-ons နှိပ် ပြီး Search box မှာ ထည့် ရှာပါ။
ပြီး ရင် add to firefox button ကို နှိပ် လိုက် ရုံပါ ပဲ။
ဒီ ပုံ လေး ကြည်. ပါ။
ပျော် ရွှင် ကြ ပါ စေ.......................